Ebumnuche asaa kpatara Leaddị Ndu Ji Nwụrụ Anwụ | Martech Zone
Ma ndị na-ere ahịa dijitalụ na ụlọ ahịa brik na ngwa agha na-achọ mgbe niile maka ụzọ ọhụrụ na ụzọ ọhụụ iji weghara ndị ọzọ na-eduga ma gbanwee ha ka ha bụrụ ndị ahịa na-akwụ ụgwọ. Ikwu nke a bụ nnukwu ihe ịma aka ga-abụ okwu ekwesighị ekwesi, ebe ọ bụ na ọbịbịa nke ịntanetị emeela ka asọmpi na-ada ada maka ụlọ ọrụ ọ bụla a pụrụ ichetụ n'echiche.
N'ime afọ niile, ụlọ ahịa ga-etinye ụdị "Kpọtụrụ Anyị" na weebụsaịtị ha na-enwe olileanya na ndị nchọgharị nwere mmasị ga-ejikọ ha. Formsdị ndị a "Kpọtụrụ Anyị" bụ ihe anyị ndị ahịa dijitalụ na-akpọ "Static Lead Forms;" ma ka ha jere ozi n’ozi ihe dịka afọ 10-15 gara aga, ha arụghị ezigbo ọrụ dịka ha d ị na mbụ. N'ezie, aga m ekwuru ya ha nwụrụ nke ọma.
Dịka m kwuru na isiokwu ndị gara aga, mgbasa ozi mmekọrịta na-aghọwanye ndị ama ama n'etiti ndị na-ere ahịa (ma dijitalụ na brik na ngwa agha), ọ na-edochi ngwa ngwa maka ụdị ụzọ. N'agbanyeghị nke ahụ, ị ​​nwere ike na-ajụ onwe gị "Ọ bụrụ na ndị na-ere ahịa ka na-eji ụdị ụzọ isi eme ihe, gịnị kpatara ị ga-eji were na ha nwụrụ anwụ?"
Ndia bu ebum n’uche asaa mere ndu eji adighi nma:
1. Onweghi Onye choro Ijuputa Stdị Static Anymore
N'ime afọ ole na ole gara aga, ụdị ndụ dị iche iche apụọla naanị mma. Ọ dịghị onye na-a attentiona ntị n'ezie na-edu ụdị ọzọ; na hoo haa, ndị na-azụ ahịa na-anata ihe ọ bụla nke bara uru site na ịnyefe ozi ha. Mgbe ha nyefere ozi kọntaktị ha, ọ dị ka a ga - asị na ọ ga - abanye n'ime oghere ojii… ruo mgbe onye na - ere ahịa na - akpọ ha, n'ezie.
Mgbe ndị na-azụ ahịa nyefere ozi kọntaktị ha, olile anya bụ na mmadụ si ụlọ ọrụ ahụ ga-enweta ihe ọmụma na akụrụngwa ha na-achọ. Ugbu a, ọ bụrụ na m mụtara ihe ọ bụla dị ka onye na-azụkarị ihe n'ịntanetị, ezigbo nzube nke ụdị ndị a bụ iji nweta ozi kọntaktị ha ma renye ha ihe. Mgbe ụfọdụ a na-azụlite ndu, ma mgbe ụfọdụ ọ bụghị. Uzo obula, otutu ndi ahia nke jiri obi ha mejuputa uzo ha ka di n’elu onu ahia (ma obu na oge nyocha) - nke putara na ha adighi njikere ime zuo.
Ebe ahụ bụ otu oge mgbe idejupụta ụdị ndu dị oke ala bụ naanị ihe ndị ahịa mere iji nweta ozi ndị ọzọ. Agbanyeghị, na ọbịbịa nke ịntanetị, ndị na-azụ ahịa aghọọla ndị na-achọghị mma maka ngwaahịa na ọrụ ha na-etinye na ya - ọ bụ n'ụzọ ziri ezi! Enwere nhọrọ ndị ọzọ maka ndị na-azụ ahịa ịhọrọ site na ya, yabụ ha na-ewepụta oge iji mee nyocha ahụ. Ọ bụrụ na ha ka na-achọ ozi ndị ọzọ, ikekwe ha achọghị ka ere ha ozugbo.
Ahụmịhe mmekọrịta (ma ọ bụ ụdị mmekọrịta mmekọrịta) na-ebufe ngwa ngwa ngwa ngwa dị ka usoro kachasị mma maka ijide n'etiti azụmahịa na ntanetị. Ihe kpatara nke a bụ n'ihi na ọ na-enye ndị ahịa ohere ịmekọrịta mkparịta ụka 2 na weebụsaịtị gị iji nweta azịza ha na-achọ.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo, onye na-azụ ahịa chọrọ ịma ụdị nhọrọ ego kacha mma maka ọnọdụ ha tupu ịzụta arịa ụlọ. Ezigbo ihe atụ nke ahụmịhe mmekọrịta bara uru ga-abụ nyocha nke na-enyocha onye na-azụ ahịa na otu onye (dabere na ozi pụrụ iche ha na-enye) ma na-enye ha azịza ezi uche dị na ya. N'ezie, nke a na - eduga n'isi okwu anyị ọzọ….
2. Ahụmahụ Mmekọrịta Na-arụpụta Nnukwu Aka Aka
N'adịghị ka ụdị nduzi dị iche iche, ahụmịhe mmekọrịta na-enye ndị ahịa ohere ka ha na weebụsaịtị gị kparịta ụka. Kama "ijupụta na oghere" (Aha, e-mail, ekwentị, nkọwa), mkparịta ụka na-eme site n'ọtụtụ ajụjụ na azịza. N'ihi nke a, ọnụego ntinye aka na ebe nrụọrụ weebụ na-adịkarị elu karịa nke weebụsaịtị nwere ụdị nduzi dị iche iche.
Otu n’ime ụdị ahụmịhe mmekọrịta kachasị enwekarị bụ nyocha. N'ime ahụmịhe nyocha, ụdị na-ajụ ndị na-azụ ahịa ajụjụ dị iche iche iji wee chọpụta nkwubi okwu banyere ha ma nye ha azịza ga-ekwe omume maka nsogbu ha ugbu a. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo, onye na-azụ ahịa na-eleta weebụsaịtị webụsaịtị nke ụlọ ma na-anwa ịchọpụta atụmatụ ụlọ ha ga-eso (ma enwere ọtụtụ ịhọrọ site na). Ọ na-enyo na nke a bụ ahụkarị nsogbu n'ihi na ọtụtụ ndị gaje ịbụ renters. Goodzọ dị mma iji dozie esemokwu a ma bulie obi ike ndị ahịa bụ ịmepụta nyocha nke na-enye atụmatụ atụmatụ ala. N'ime ahụmịhe ahụ, weebụsaịtị ahụ ga-ajụ ajụjụ dị oke mkpa dị mkpa (Ex: "Ole mmadụ ole nọ n'ezinaụlọ gị? Have nwere ụmụaka? Have nwere anụ ụlọ buru ibu ?, wdg.") Na azịza nke ndị na-azụ ahịa ga-eweta nkwubi okwu .
Ugbu a, ị ghọtara ihe m na-ekwu mgbe m kwuru "ndị na-azụ ahịa nwere ike ịkparịta ụka na weebụsaịtị gị?" Ebe nrụọrụ weebụ na-ajụ ajụjụ na ndị na-azụ ahịa na-aza azịza nye ajụjụ ndị ahụ. N'ihi na mkparịta ụka na-ewe obere oge karịa naanị idejupụta akwụkwọ, nke ahụ pụtara itinye aka na weebụsaịtị gị dịkwa ogologo. Tụkwasị na nke a, mgbe enyerela onye na-azụ ahịa azịza ga-ekwe omume (ka anyị kwuo, maka nkọwa, ọ bụ ime ụlọ 2, ime ụlọ ịwụ ahụ 1.5), ohere dị mma na onye na-azụ ahịa ga-achọ ịnọ na weebụsaịtị gị wee mee obere nyocha ọzọ na ngwọta ahụ (ma ọ bụ atụmatụ ala, kama). Dị ndu dị iche iche anaghị eweta ihe ngwọta ozugbo; ya mere, kedụ ezigbo ihe kpatara ndị ahịa ga-eji nọrọ na webụsaịtị gị rue mgbe ndị na-ere ahịa kpọrọ ha? Nke a bụ ihe kpatara itinye aka na-adịkarị ala karịa na weebụsaịtị yana ụdị nduzi dị iche iche.
3. Iji Aka Kacha Elu Na-abịa Ntụgharị Dị Elu
Dịka m kwuru na mbụ, ndị folks enweghị mmasị na dejupụta ụdị ụzọ dị iche iche. Ọzọkwa, ozi ha abanye na ihe efu amaghi (rue mgbe onye na-ere ahịa na-enye ha nsogbu, nke a na-abụkarị ikpe) ma ha anaghị enweta ihe ọ bụla bara uru ozugbo ha nyefere ozi kọntaktị ha. N’ọtụtụ ụzọ, ndị ahịa na-adị ka a na-aghọgbu ha. A na-ekwe ha nkwa ihe bara uru, mana anaghị enweta ya mgbe niile. Nke a bụ ya mere na ndị na-eri ego anaghị ejupụta ụdị ndu ọzọ.
Otu n'ime isi ihe mere na mmekọrịta mmekọrịta na-aga nke ọma bụ n'ihi na ọ na-enye ohere ụdị nnabata na-ekwe nkwa ha nwere ike ime! Kama ichere maka ozi ndị ọzọ sitere na onye na-ere ahịa, ha nwere ike nweta azịza n'ime obere nkeji. Ọ bụrụ na ndị na-azụ ahịa na-ekwe nkwa ozugbo, ha agaghị amalite ahụmịhe ahụ; ha ga-emezue ahụmịhe ahụ ma gbanwee site na ndị na-azụ ahịa na-edu ndú zuru ezu. Ndị ahịa achọghị ichere ka onye ọzọ nye ha uru ahịa nke ụgbọ ha, ha achọghịkwa ịkwaga na atụmatụ ụlọ dị oke ọnụ na ụlọ na-enweghị isi. Ndị na-eri ngwaahịa ga-achọ itinye nsen ha n'otu nkata tupu ha abanye na usoro ịzụta / ịgbazinye ego.
Ihe ngwọta nye nsogbu nke ndị na-eri ihe bụ ihe kachasị eme ka ha mechaa ahụmịhe. Echere m, n'aka - ahụmịhe mmekọrịta nwere ike iwe obere oge (ebe ndị ahịa chọrọ ịza ajụjụ iji nweta nsonaazụ ha), mana ọ bụrụ na ọ pụtara ị nweta ihe bara uru nke ga-enyere ha aka mkpebi mkpebi ha, ha ga-ewere ya oge ozo. Ma otu a anyị doro anya, ihe mkpali ahụ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla ịchọrọ ka ha bụrụ. O nwere ike ịbụ uru ahịa, nyocha (ma ọ bụ akụkọ), dere ma ọ bụ nwepu ego, akwụkwọ ntanetị - ihe ọ bụla obi gị chọrọ.
4. Mmekọrịta Ahụmịhe Emebere Emebere
N'agbanyeghị onye na-eleta weebụsaịtị gị, ụdị ndu ga-adị n'otu oge niile. Enwere ohere iji jupụta aha gị, nọmba ekwentị gị, adreesị ozi-e gị, mgbe ụfọdụ enwere ohere maka ajụjụ ma ọ bụ ikwu okwu. Nke ahụ bụ n'ụzọ zuru ezu oke nke usoro static na-eduzi. Oge ụfọdụ ị nwere ike gbanwee ajụjụ, mgbe ụfọdụ ị gaghị enwe ike. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụ nnukwu ụgbọ iji jide ozi kọntaktị - ọ nweghịkwa karịa nke ahụ.
Otú ọ dị, ahụmahụ mmekọrịta, nwere ọtụtụ ohere na-adịghị agwụ agwụ maka nhazi. Ahụmahụ mmekọrịta ọ bụghị naanị na ị na-akwado ihe mgbaru ọsọ azụmahịa gị, kama ha na-egbo mkpa nke ndị na-azụ gị. Nanị ihe a chọrọ na ahụmahụ ndị ị mepụtara bụ na ị ga-ekwe nkwa ihe bara uru. O nwere ike ịbụ ntule, ego, uru azụmaahịa, ntinye aka - ihe ọ bụla ga - eme ka ndị na - azụ gị zuo oke iji mee ka ha mezue ahụmịhe.
E wezụga inwe ike hazie ahụmịhe ụdị ahụ (ma hazie ajụjụ ndị ahụ), ihe ọzọ dị mma bụ na akara gị nwere njikwa zuru oke maka ahụmịhe mmekọrịta. Ihe niile site na agba agba, na onyonyo, na nke kachasị mkpa, akara akara, kpamkpam bụ maka uche onye okike. Kedu ụzọ kacha mma iji mee ka akara ika gị dị mma karịa ka ị jikọtara ya na ụdị ụzọ mmekọrịta gị? Ọ bụghị naanị na onye na-azụ ahịa ga-ama na ozi ahụ na-agakwuru gị, mana ika ahụ ga-agbazi echiche na ha na-enweta ihe ha na-arịọ.
Echere m na isi m na-achọ ịkọwa bụ na ụdị ahụmịhe ndị a niile na-atọ ụtọ. Ọ bụghị ụdị larịị nke na-enye gị ohere itinye ederede. Ndị ahịa agaghịzi ekwu okwu na mgbidi. Weebụsaịtị gị nwere ike ịnakọta ụfọdụ ozi sitere na ndị ahịa wee mepụta ihe bara uru dabere na ozi anakọtara. Statdị ndu nwere ike ime nke ahụ.
5. Ọ dị mfe karịa ndịiche gị na ndị asọmpi gị
Agbanyeghị na ụdị ụzọ dị iche iche anaghị abụ ụzọ ewu ewu maka ndị ahịa ịjụ maka ozi ndị ọzọ, a ka nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ahọrọ ịkụ ụdị ndị a na weebụsaịtị ha. Ma ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ụdị ndị na-eme ka ahụmịhe mmekọrịta na-arịwanye elu, ụdị gị nwere ike ịdị n'etiti ndị na-asọmpi ya. N'ihi gịnị? Ka anyị kwuo ihe doro anya - ọ bụghị mmadụ niile na-eji ọdịnaya mmekọrịta maka mkpa ijide ha. Y’oburu n’itinye udiri omuma ihe obula n’ime webusaiti gi, o gha aputa ndi ahia gi. Kama idejupụta ụdị akwụkwọ ndị a na-emebu na ichere maka nzaghachi, ha na-aza ajụjụ na ihe bara uru. Nanị ahụmịhe ahụ dị ezigbo iche.
Nke abuo, anyi aghaghi ichefu banyere ihe ndi mmadu na - eme ka ndi mmadu nwee ndu. Ọbụghị naanị na ụdị ndu ndu mmekọrịta ga-apụ apụ n'uche mmadụ, mana ahụmịhe n'ezie (ntule, ọnụahịa azụmaahịa, ajụjụ ọnụ, egwuregwu, wdg) agaghị echefu echefu yana ihe ndị asọmpi gị agaghị abụ ' na-eme…. ma.
6. Static Lead Forms enweghị ike weghara ego nke Data Digital Marketers Mkpa
Kedu ụdị ubi ndị ị na-ahụkarị n'ụdị ụzọ mgbapụ? Aha, ekwentị, adreesị ozi-e, ụdị ajụjụ (mgbe mgbe, ọ na-ada ada) na mgbe ụfọdụ mpaghara maka nkọwa na ajụjụ. Nke ahụ abụghị ọtụtụ ozi, ọ bụ? Ozi kọntaktị onye na-azụ ahịa adịghị enye nghọta ọ bụla banyere ihe mere onye ahịa ahụ ji pụọ iche. Enweghị ozi gbasara mmasị ịzụ ahịa, usoro iheomume ịzụ ahịa, ọdịmma ndị ahịa - ndepụta ahụ na-aga n'ihu. N'ihi na enweghi mmezi etinyere ya na ụdị ụzọ dị iche iche, ị nweghị ike ịjụ ndị na-azụ ahịa ajụjụ gbasara ihe akara gị chọrọ ịmatakwu banyere.
Nyere otu esi eme ka ụdị nhazi mmekọrịta mmekọrịta dị, ụdị gị nwere njikwa zuru oke na ajụjụ ọ bụla a jụrụ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmụtakwu maka ihe onye ahịa nwere mmasị ịzụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ha nwere mmasi ịmụ banyere nhọrọ gbasara ego, ihe ị ga - eme bụ ịrịọ. Ọ dị mkpa ịjụ ajụjụ ndị a dị mkpa maka ndị ahịa gị n'ihi na ọ na - enyere gị aka (onye na - ere ahịa dijitalụ) iji nweta nghọta ka mma banyere ndị na - azụ ahịa gị yana otu esi azụ ha ahịa n'ọdịnihu.
Na mgbakwunye na inyere ndị na-ere ahịa dijitalụ dị ka gị onwe gị, otu ndị na - ere ahịa gị (ọ bụrụ na ọdabara) nwere ike inyocha ozi enwetara rue ọkwa mmadụ, wulite profaịlụ ndị ahịa ma hazie usoro ha dabere na ozi pụrụ iche na profaịlụ ha.
7. Ndị ahịa na-ejigide Ozi ndị ọzọ
Tinyere inwe ike ịjụ ajụjụ pụrụ iche, ahụmịhe mmekọrịta na-enyekwa ndị ahịa ohere ịkọwa ma nọgidesie ike. Mgbe onye na-azụ ahịa gụchara ahụmịhe mmekọrịta na weebụsaịtị gị (wee nata ihe mkpali ha n'ụdị nyocha, nyocha, ego, wdg), akara gị nwere ike ịnye ozi bara uru karị - ikekwe otu ị ga - esi kpalie mkpali ha nyere. Ka anyị kwuo, dịka ọmụmaatụ, ị bụ onye na-azụ ahịa na-eleta weebụsaịtị webụsaịtị. Mezue ọnụahịa azụmaahịa wee nye gị uru ahịa gị.
Yabụ, ugbu a gịnị? Ndị ahịa ahụ nwere ike ịnyekwu ozi gbasara ihe ha nwere ike ime iji hụ na ndị ahụ weghaara akpaaka na-eduga na-enweta ọtụtụ uru site na ahia ha. O nwere ike ịbụ n'ụdị nhọrọ ahụmahụ mmekọrịta ọzọ. Otu ahụmahụ nwere ike ịbụ ịtụle ma ha kwesịrị ịzụta "eji ma ọ bụ nke ọhụrụ," na nke ọzọ nwere ike ịbụ maka ịchọta nhọrọ ego kacha mma. Ihe ọ bụla ahụmịhe ahọpụtara, ozi ndị ọzọ na-enye ndị ahịa ohere iche n’ezie banyere mkpebi ọ bụla ha mere n’ahịa gị. Ọzọkwa, ka anyị kwuo eziokwu - ka ha na - echekwu echiche ma na akara gị ga - apụta, ọ ga - abụ na onye na - azụ ahịa ga - echeta akara gị.
Tags: ọdịnaya mmekọrịtammekọrịta mmekọrịtammekọrịta mgbasa oziformsdị nduụdị ndu nwuru anwungwa ahiaPERQsmart CTA
Anyị ahụchaala nke a. Aticdị static agbanweela ọnyà spam mgbe nyocha na mmekọrịta, mmekọrịta ibe na-eme ka ndu na ntụgharị dị mma. Edemede dị egwu!
Jenụwarị 30, 2017 na 2:04 PM
Have nwere ezigbo ihe atụ nke a? Echere m na isi okwu ahụ dị mma ma na-ebu ibu. Agbanyeghị, ịhapụ ikwu, ị ga-dejupụta ụdị 3. #iwua 🙂
Jenụwarị 30, 2017 na 2:09 PM
Kacha mma. Kwuo. Mgbe.
Ihe ọmụma! Enwere ọtụtụ ekele. Mana biko kpachara anya mgbe ị na-enye ihe atụ. Otu ulo obibi na-ajụ “have nwere ụmụaka?” ga-emebi Federal Fair Housing Act. Ọnọdụ ezinụlọ ghọrọ klaasị echedoro na 1988. Daalụ nke ukwuu!
Nnukwu ihe - daalụ maka ị mata nke ahụ!